Ny fandroana Arabo ao Granada | Vaovao momba ny dia
Ny fandroana Arabo ao Granada
Mariela Carril | | Granada, Inona no ho hita
Omeo ny tenanao a tsara fandroana mampiala voly, ho an'ny vatana sy ho an'ny fanahy. Kolontsaina maro no mahatakatra izany toy izany, na dia nisy fotoana tany Eropa aza raha olana lehibe faharoa ny fahadiovana. Tsy maintsy nahasarika ny sain'ny Arabo izany, nandritra ny fandresen'izy ireo, satria ny dikan'ny rano sy ny fifandraisany amin'ny fialamboly sy fialan-tsasatra tena zava-dehibe ho azy ireo izany.
Noho izany, tany amin'izay nalehany, raha azony natao, dia nanamboatra loharano, zaridaina, ary koa fandroana. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fandroana romanina, ny Hammam, ny Fandroana arabo, izy ireo no toerana mety hialana sasatra, hifanakalo hevitra momba ny olana ara-politika sy ara-tsosialy na handany fotoana miaraka amin'ny namana sy olon-tsy fantatra.
1 Ny fandroana araba
2 Hammam traikefa any Granada
Ny fandroana araba
Araka ny efa nolazainay tetsy ambony, ny Arabo, angamba satria tsy dia fahita any amin'ny tanindrazany, manana fifandraisana lalina amin'ny rano. Maka ny volavola mahazatra an'ny Teny romana nanome aina ny hammam izy ireo, misy efi-trano telo misy hafanana mifanohitra. Voalohany io Efitra mangatsiaka na bayt al-baryt (frigidarium, amin'ny latina), ny Efitra antonony na bayt al-wastani, tepidarium ary ny Efitra mafana na bayt al-sajun, ny caldarium.
Amin'ireto efitrano telo misy rano ireto, amin'ny mari-pana telo samihafa, dia ampiana ny efi-trano miova sy ny fidiovana, ny efitrano fanorana ary ny efitrano mahazatra handry mandritra ny fotoana fohy ary hiala sasatra. Raha tamin'ny vanim-potoana antenantenany dia nandehandeha pesta ny Eoropeanina, tsy nisy fahadiovana, misy koka sy loto na aiza na aiza, ny Arabo, niaraka tamin'ny fandresena an'i Espana, tamintsika, dia nampiditra ity ampahany mahavariana sy milamina amin'ny kolontsain'izy ireo ity.
Ny hevitra dia hoe mandalo ny vatana a tsingerina iray manontolo izay manomboka amin'ny rano mafana, izay acclimatizes ny vatana, efitrano mafana iray izay tena miala sasatra ny hozatra ary amin'ny farany, mandray tsara tohina ny rano mangatsiaka mamelombelona. Afaka mandany ora maro eto ianao, mamerina ny tsingerina imbetsaka na manampy na manelanelana fanorana sy fialan-tsasatra. Izany no tao Córdoba taonjato maro lasa izay, mihoatra ny 600 fandroana ho an'ny daholobe misy sokajy samihafa ...
Taorian'ny Reconquest dia nosokafana tany Granada ny fandroana arabo voalohany. Eo amin'ny sisa tavela amin'i Hammam taloha izy ireo tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, tao amin'ny Alhambra. Toerana aiza io, feno lavadrano, loharano, hady sy fandroana. Raha te hahita ny fandalovan'ny Arabo manerana ny firenena ianao dia izao no toerana tsara indrindra. Raha ny tena izy, Granada no faritany mitahiry fandroana arabo betsaka indrindra Fahiny rehefa manampy hatramin'ny 31. Ohatra, ny fandroana Al Andalus, ny fandroana Elvira na ny Fandroana Arabo ao amin'ny Comares Palace, raha tsy hitonona afa-tsy vitsivitsy.
Nizara efitra fandroana ve ny lehilahy sy ny vehivavy? Mazava ho azy tsy misy. Ny vehivavy sy ny lehilahy dia tsy nifamaky akory tamin'ny antoandro, satria nisy andro ho an'ny lahy sy ny vavy. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia nandany ny ankamaroan'ny fijanonany tao amin'ny trano fidiovana tao amin'ny efitrano voalohany, ny bayt al-wastani, satria izy no lehibe indrindra, afovoan'ny rafitra, akaikin'ny efitrano fanovana, fa nandalo ny efitrano fanorana sy ny hatsembohana., Ary ilay manana fifanakalozana ara-tsosialy lehibe indrindra.
Tsara izany aorian'ny Christian Reconquest maro amin'ireo fandroana ireo namboarina tamin'ny andron'ny An-Andalus sy ny vanim-potoana Silamo hafa, dia voarara na ampiasaina indray miaraka amina toerana hafa, hopitaly, ohatra, nataon'ny Castilians sy ny Aragonese. Soa ihany fa tsy nanjavona daholo izy ireo.
Hammam traikefa any Granada
Misy fandroana Arabo maromaro any Granada. Ohatra, misy ny Famorian-drano any San Miguel, miorina eo afovoan'i Granada. Izy io dia manana dobo filomanosana fito miaraka amin'ny maripana samihafa, efi-trano roa miova miaraka amina lokom-baravarankely handao ny entantsika, ranonorana, efitrano fanorana ary koa efitrano fialantsasatra.
Afaka mankafy fandroana arabo ianao raha tsy misy fanorana mandritra ny 23 euro na miaraka amin'ny fanorana mandritra ny 32 euro. Raha mila fandroana miala sasatra miaraka amina fanorana miaraka amin'ny menaka esansiela organika ianao dia miakatra hatramin'ny 42 euro ny vidiny. The Aljibe de San Miguel misokatra manomboka ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady ary any Calle San Miguel Alta, 41 taona, tena akaiky ny Katedraly.
Ny efitra fandroana iray hafa dia ny Elvira Bath & Spa. Izy io dia manana dobo mangatsiaka sy mafana, efitrano fandroana, faritra fisotroana dite misy seza mafana ary mazava ho azy fa mety hahazo otra ao vidiny tsara. Amin'ny faran'ny fitsaboana dia azonao atao ny mandro amin'ny savony sy ny shampooing miaraka amin'ny vidiny. Kitapo mahazatra miaraka amin'ny hydrotherapy, etona ary dite misy sôkôla dia maharitra 90 minitra ary eo akaiky eo 25 euros.
Ny serivisy Premium Maharitra adiny iray sy sasany mahery ary 50 euro ny vidiny. Elvira Bath & Spa sokafy manomboka amin'ny 5 tolakandro ka hatramin'ny 10 alina ary mety hisy fivoriana miboridana. Hitanao ao amin'ny Calle Arteaga, 3. Safidy iray hafa ny Fandroana arabo Royal an'ny Alhambra, dika mitovy amin'ny fandroana ao amin'ny Comares Palace. asa ao anatin'ny Hotel Macia Real avy amin'ny Alhambra ary misy Jacuzzi, fandroana Tiorka, cryotherapy ary dobo mafana sy mangatsiaka.
El boribory fototra Anisan'izany ny pisinina mafana, dobo mangatsiaka, Jacuzzi misy sambo rano amin'ny haavo lumbar sy vozongo, cryotherapy, fandroana Tiorka ary efitrano fialan-tsasatra miampy dite. Maharitra 90 minitra ary mitentina 30 euro. Avy eo dia misy ny Royal Circuit misy fanorana 15 minitra ho an'ny 40 euro, ary ny Circuit Califa miaraka amina antsasak'adiny mandritra ny 50 euro. Misokatra mandavantaona manomboka amin'ny Alahady ka hatramin'ny Zoma manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 2 hariva ary manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 hariva. Ny sabotsy dia misokatra tsy tapaka izy amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 10 alina.
Ny iray amin'ireo trano fandroana malaza indrindra dia tsy isalasalana fa Hammam Al Andalús, miorina amin'ny tranobe vato, zato, eo afovoan'ny tanàna. Manana ny fananana rehetra anananao ianao ary na dia mizarazara ho an'ny lahy sy ny vavy aza ny efitrano fanovana, mahazatra ny dobo, ka tokony ho izany ento ny akanjo fitondra tenanao na mividy iray eo. Hammam dia manana efitrano fito: fialan-tsasatra, hatsiaka amin'ny rano amin'ny maripana 18 ºC, efitrano mafana misy rano amin'ny 36 ºC, efitrano mafana be misy rano amin'ny 39ºC, efitrano misy etona misy essentielle manitra, efitrano fanorana ary efitrano vato mafana hanadiovana ny hoditra.
Manomboka amin'ny 37 euro ny vidiny ary ny ambony indrindra dia 83 euro ho an'ny boriborintany Midra misy fandroana 45 minitra, fanorana 30 ary 15 an'ny kessa nentim-paharazana (fanamasinana amin'ny farafara vato mafana). Misokatra manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny misasakalina ity fandroana arabo ity ary any Calle Santa Ana, 16 taona.
Santionany amin'ireo safidy ireo, fa ny tena marina dia tsy afaka mamakivaky an'i Granada ianao ary tsy hiaina izany fotoana izany. Misaotra anao ny vatanao sy ny sainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Ny fandroana Arabo ao Granada
Lahatsoratra mahaliana sy manabe. Raha avelanao aho, ny sary fahadimy dia mifanaraka amin'ny fandroana arabo lehibe indrindra ampiasaina any Espana ankehitriny: ireto fandroana goavana ireto dia ao amin'ny Plaza de los Mártires any Malaga, tsara tarehy ry zareo, arahabaina
Los Caños de Meca any Cádiz
Ponta Delgada any Azores